Xog: Xassan, Jawaari iyo R/W C/weli oo ku shiraayo Villa Somalia. - iftineducation.com
iftineducation.com – War goor dhow naga soo gaaray Aqalka madaxtooyada Somalia, ayaa sheegaya in halkaasi uu xiligaani kulan uga socdo Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka ah ee Somalia, Xassan Sheekh, R/W C/weli iyo Gudoomiyaha Baarlamaanka dalka Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari.
Kulanka oo la sheegay inuu yahay mid Khaas ah, islamarkaana uu albaabada u xiran yahay, ayaa waxaa la soo warinayaa in kulankaasi uu yahay mid ay uga hadlayaan qeybinta Mooshinka, iyadoona gudoomiyaha Baarlamaanka dalka uu kulankaasi sharaxaad muhiim ah ka siiyay Labada Mas’uul ee uu Khilaafka ka dhexeeyay.
Jawaari ayaa ugu horeyntii la sheegayaa in Madaxweyne Xassan iyo C/weli uu ugu bishaareeyay in kulanka maanta uu kusoo idlaaday Jawi degan, islamarkaana ay Xildhibaanada si hufan u guteen Waajibaadkooda.
Sidoo kale, Jawaari ayaa waxa uu R/W C/weli u sheegay in kulanka soo socda looga baahan yahay Xarunta Baarlamaanka si uu isku difaaco.
Dhanka kale,Seddexda Mas’uul ayaa waxa ay si gaar ah uga hadleen xalinta Khilaafka, waxa ayna isla garteen in la dhameystiro kulamada ay Xildhibaanada go’aanka uga gaarayaan Mooshinka maanta la qeybiyay.